မယ့်ကိုး: “ ငိုကြွေးနေတဲ့ ရောင်ပြန် ”
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 5/10/2009 02:15:00 PM
အမေ့ရဲ့ ဒုက္ခအိုးမလေး..အဆင့်တော့ မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်လား....
10/5/09 2:33 PM
မမ ရေ လည်လည်ရောက်ခဲ့တယ် ရှင့်
10/5/09 3:45 PM
ဒီစာစုလေးတွေ ဖတ်အပြီး ခေါင်းမာတတ်တဲ့
တို့ ကိုယ်တိုင် မေမေ့ကို အရမ်း တမ်းတမိသွားတယ်..
အမေဆိုတာ လောကမှာ ကိုယ့်ကို နားအလည်ပေးနိုင်ဆုံး ကိုယ့်ကို အခွင့်လွှတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်အတွက် အချိန်အများကြီးပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရင်ထဲက သွေးစက်လေးကနေ လူဖြစ်လာတဲ့ သမီးလေးကို အမေက မေတ္တာတွေ ပေးနေမှာ သေချာတယ် အမေ့မေတ္တာနဲ့ မယ်ကိုးလေး ငြိမ်းချမ်းမှာပါနော်..
10/5/09 5:33 PM
မမနိုင်းရာ... မမက လိမ္မာပါတယ်။ ဘာလို့သမီးဆိုးလေး လို့ ပြောရတာတုန်း။ ဟုတ်ရပါဘူး။
ပြောတော့ပြောရဦးမယ်။ သမီးဆိုးလေးဟုတ်ဘူးနော်။ လိမ္မာတဲ့ သမီးလေးနော်။
ဟဲဟဲ...ဆောရီး ကဗျာဖတ်ရင်း ဈာန်ဝင်သွားလို့ မမနိုင်း ဖြစ်သွားတာ။ မမကိုး။။ မမကိုး။ အမလဲ မေ လို့ခေါ်တယ်လား။ အနော်ကတော့ မေ လို့ခေါ်လိုက် မေမေ လို့ခေါ်လိုက်ပဲ။ မေမေလို့ ခေါ်တာတော့များတယ်။ ချွဲချင်လို့ရှိရင် မေ ပေါ့။ ဟဲဟဲ
မယ်ကိုးရေ.. ကောင်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပြောတတ်ချင်တယ် မပြောတတ်တော့ ရင်ဘတ်တွေတောင် အက်ကွဲလာတယ် မြိုသိပ်ထားရလွန်းလို့။ ကျွန်တော် တစ်ကယ်ခံစားမိလိုက်ရတယ်။ မယ်ကိုးရေ ခင်မင်မိသူဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ အရေးအသားထဲ မယ်ကိုးလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါ။ ခံစားမှု့တွေကို စကားလုံးတွေအဖြစ် သေသပ်လှပ ကျစ်လစ်စွာ ဖော်ပြနိုင်မှုတွေကိုလေ။
10/5/09 6:18 PM
ဒီတစ်ယောက်ရေးပြပုံကလဲ တမျိုးတဘာသာ တမူထူးတာပဲ...
ခေါင်းမော့ကာ ရယ်ချင်ယောင်တောင် ဆောင်ဦးမတဲ့...
ပြဠာန်းတာ ဒီလို ဌာန်းသလားလို့ x နဲ့ v နဲ့ ပဲ ကွာပါတယ်...
(ဆရာလုပ်တယ်ထင်ရင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်)
10/5/09 8:23 PM
အင်း ဘာတဲ့ ၊
''ဘဝဟာ ပြဌာန်းပြီးသား စာအုပ်တဲ့လား။ခါးလွန်းလို့ .....''
ဒီလိုပဲ လက်ခံ လိုက်ရတာပဲလေ .. ဒါဟာ လည်း ဘ၀ ဖြေနည်းတစ်မျိုးပေါ့..
''အလီဘာဘာတံခါးတွေအပြင် အလီဘာဘာလမ်းတွေပါ ရှိသေးကြောင်း ကျွန်မ သိလာခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအသုံးလေး အရမ်းသဘောကျတယ် ..ရောပြီးသုံးသွားတာလေး
'အတိတ်ကံနဲ့ သမီးလွန်ဆွဲတဲ့ပွဲမှာ သမီးဘက်က လာအားပေးပါလား အမေရယ်။ ''
ဟုတ်တယ် . ဒီလိုတွေးတာ ကျွန်တော်တို. အလွန်လား
လွန်ပါဘူးနော် .. အနားမှာ တခါတလေ ၊ ခုချိန်ထိ အနီးကနေ အားပေးနေစေချင်တုန်း ......
ကျွန်တော်လည်း မိဘ ရင်ခွင်ကနေ အဝေးမှာ ကိုယ် ပွဲကိုယ် အားပေးရင် ရှုင်သန်နေရတာ .. ၁၅ နှစ်ကျော်ပြီ ....
10/5/09 10:07 PM
10/5/09 11:16 PM
ကျွန်မရဲ့ ပန်းခင်းဟာ ကျွန်မ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပန်းခင်းကို ကိုယ်တိုင်ရှင်သန်အောင် စိုက်ပျိုးနိူင်ပါစေ ညီမရေ...
10/5/09 11:28 PM
ရီချင်လျက်နဲ့ ဇာတ်ကွက်အလိုချ ငိုလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ဘ၀ဇာတ်မင်းသမီးပေါ့ မမယ်ကိုးရာ
10/5/09 11:41 PM
နေရောင်ခြည်ကို ဖန်တီးယူနိုင်မှာပါ ညီမလေးရေ။
ခေါင်းမေါ့ ကာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ (ထာဝရ) ပြုံးရယ်ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ။
ကိုယ့်ဆီမှာ အဲဒါတွေ တကယ်မရှိဘူး။